Lockdown Art: Yangon’s Stunning Art Galleries Online - Myanmar Geographic: To Escape, To Explore, To Indulge Myanmar Geographic: To Escape, To Explore, To Indulge %
by MARY May 15, 2020 May 16, 2020
© Richie Htet – The Wrestler (Myanm/Art)
© Richie Htet – Dream of the Flower Eating Demon (Myanm/Art)
Director : nathalie.johnston@gmail.com
Gallery Manager : minchitp@gmail.com
© Chuu Wai Nyein – Meet Me Where The Wild Things Grow (River Gallery)
© Than Kyaw Htay – Silent Moves (River Gallery)
© Zaw Win Pe – The Natural Features (River Gallery)
Credit: © Min Wae Aung – Look (New Treasure Art Gallery)
Credit: © Min Wae Aung – Return Home (New Treasure Art Gallery)
©Nico Djavanshir. From the project ‘Who I Am.’ by Myanmar Deitta.1 of 4
သား အကို က ကျွန်တော်ကို ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတယ်။ ကိုယ်ခံပညာလည်း သင်ပေးတယ်။ သူများတွေက သားကို အနိုင်မကျင့်အောင် သူက သင်ပေးတာ။ သား မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကာယဗလမောင်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ ညီခန့်နိုင် My brother trained me in self defence and to be strong and fit so that I can’t be bullied by other people. I have many desires but one wish is to beabody builder. Nyi Khant Naing
သမီး စန္ဒရား တီးရတာလည်း ကြိုက်တယ်။ တယောတီးရတာလည်း ကြိုက်တယ်။ နှစ်ခုစလုံး ကြိုက်တယ်။ ဒီရက်ပိုင်း တယော ပြိုင်ပွဲအတွက် လေ့ကျင့်နေရာလို့ သိပ်မအားဘူး။ သမီးတယောပြိုင်ချင်တာ ပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ချင်လို့ ဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရင် စင်မြင့်ပေါ်မှာ ပရ်ိတ်သတ်ကို ဖျော်ဖြေရတဲ့ ခံစားချက်ကို ကြိုက်လုိ့ပါ။ ဆောင်းလေပြည်ဝင်း (ခ) မီးမီး I like playing piano and violin. I have been busy these day with my violin contests. I like to enter violin contests not because I want to win but because I love the feeling of being on the stage performing for the audience. Saung Lay Pyay Win (Mi Mi)
သမီးက သမီးသူငယ်ချင်းကို အရမ်းချစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းကို ညဘက်အိမ်မှာခေါ်ပြီး တူတူအိပ်ချင်တယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ ညလုံးပေါက်ကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေစားကြမယ်။ အိမ်က ခေါက်ဆွဲစားတာလည်း သ်ိပ်မကြိုက်ဘူး။ ခုတော့ ညည သူငယ်ချင်းနဲ့ အင်တာနက်ကနေ စကားပြောရတာပဲ ရှိတယ်။ ဇွန်နှင်းဆက် I love my best friends. I always want to haveasleep over with them but my family doesn’t let me. We will watch movies all night and have noodles which my family don’t allow me to eat. I can only hang out with my friends at night by chatting on the phone. Zun Hnin Sett
Writer Morris Averill first published Myanmore
TaggedArtart galleryartistsLokanat GalleryMyanm/Art galleryMyanmar DeittaNew Treasure GalleryPansodan GalleryRiver GalleryUrban Sketchers Myanmar